Kaanaadaan dippiloomaatii Venezuweelaa biyyatti waliin atakaaroo keessa seene ari'atte - BBC News Afaan Oromoo
Kaanaadaan dippiloomaatii Venezuweelaa biyyatti waliin atakaaroo keessa seene ari'atte
Pirezidant Maaduuroon marsaa lammataaf bulchuuf filannoo bara dhufuu iratti ni hirmaatu jedhamee eegama.
Kaanaadaan Otoowaatti ambaasaaddara Venezuweelaa kan ta'an Wilmeer Baariyentoos Fernaandeezii fi hoogganaa Imbaasichaa Anjeel Hereeraa biyyaa ari'achuu beeksifte.
Ministirri haajaa alaa Kaanaadaa Kristiyaa Freelaand akka jedhanitti murteen kun torbee darbe magaala guddoo Venzuweelaa Kaaraakaas keessaa dipiloomaatiin ishee ariyatamuu isaaf deebii kennite dha.
Venezuweelaan Kaanadaan dhimma koo keessa galtee jeeqaa jirti jechuun komatteetti.
Kaanaadaan ammoo bulchiinsa pireezident Nikolaas Maaduroo qabannaa mirgootaa namoomaarratti qeeqaa jirti.
Jalqaba bara kanaatti hiriira mormii mootummaa ji'a tokkooof tureen namoonni 120 ol ta'an ajjeefamaniiru.
'Mootummaan Veenzuweelaa mirgoota bu'uuraa dhala namaa fi dimookraatawaa uummata veenzuweelaa irraa mulqaa, deeggarsa namoommaa akka hin argannes dhorkaa jiru kana waliin Kaanaadaan hin dhaabatu' jedhu aadde Freelaand.
'Biyyootaa naannoo sanatti michuuwwan keenya ta'an waliin ta'uun sirna bulchiinsaa Maaduuroo faallaa dimookraasii ta'e irratti dhiibbaa uumuun mirgi lammiilee biyyattii akka deebi'ee kabajamu hojii eeggalle itti fufnas' jedhaniiru.
Akka aadde Freelaand jedhanitti ambaasadar Baariyentoos biyya keessa kan hin jirre ta'uu fi dhufanis akka biyyaattii seenan hin hayyamamuuf. bakka isaan hin jirreettii eembaasicha kan hoogganaan Hereeraanis biyya gadhiisanii akka bahan gaafatamaniiru.
Kaanaadaan dursitee qondaaltota Veenzuweelaa gameeyyii irratti qoqqobbi kaahuun ishee mootummaa Veenzuweelaa aarsee jira.
Mootummaan Veenzuwelaa Obbo Koowaliik (gara bitaa) bulchiinsa Tiraamp irraa ajaja fudhata jechuun qeeqe
Hoogganaa mana maree Veenzuwelaa kan ta'an Deelsiiy Roodriigeez ibsa sanbata darbe kennaniin hoogganaa Eembaasii kaanaadaa kan magaalaa Kaarakaasitti argamuu Kirii'ag Koowaliikiin nama fudhatama hin qabne ittin jedhaniiru.
Obbo Roodriigeez Koowaliikiin 'otuu addaan hin kutiin nama nama dhiibu, badaa fi gidduugaltummaa hiikaa hin qabne' nama godhani jechuun qeeqaniiru
Ambaasadara Biraazil Ruuyi Peri'eeraas olaantummaa seeraa mootummaa sarban jechuun biyyaa ari'atteetti.
Hiriira mormii mootummaa ji'a tokkooof tureen namoonni 120 ol ta'an ajjeefamaniiru.
Mootummaan Ameerikaas Obbo Maaduuroorratti qoqqobbii kan kaa'e yommuu ta'u, bulchiinsi Traamp Maaduuroon 'Abbaa irree' ittin jedheera.
Mormitoonni sirnichaa, Maaduroo fi hoogganaan duraanii Huugoo Chaaveez imaammata sooshaaliistii hordofaniin diinagdee biyyattii mancaasaniiru jechuun qeequ.
Veenzuweelaan addunyaa irratti biyyoota qaalayinsa jireenyaan miidhaman keessaa adda duree yommuu taatu hanqina meeshaalee bu'uuraa qoricha dabaltee ishee mudateenis heddu miidhamteetti.
Turtiin aangoo Obbo Maaduroo marsaa duraa waggaa 6 bara 2019 tti kan xumuramu yoo ta'u filannoo bara dhufu gaggeessuuf karoorfame irrattis marsaa lammaffaaf ni dorgomu jedhamee yaadama.
Haasaan jalqabaa Tiraamp oggantoota muraasaan qeeqamee
Haasaan jalqabaa Prezidaantiin Ameerikaa walgahii Motummoota Gamtooman irratti taasisee biyyoota miseensaa inni caqaseen qeeqame.
20 Fuulbaana 2017
Biyya hongeefi waraanni raasu keessatti gamoo haaromsuuf biiliyoonota baasuun akkamiin ilaalama?
27 Amajjii 2022
MM Abiy humnoota Tigraay waliin mariin akka jiraatu dubbachuun isaanii gabaafame
26 Amajjii 2022
Gaazexessaan OBN ji'a tokkoo oliif hidhame 'mana murti dhihaatee hin beeku' - Maatii
Waraanaa Kaaba Itoophiyaa irratti gaheen artistoota Oromoo maal ture?
25 Amajjii 2022
Biyya hakiima barbaaddu keessatti hakiimoonni akkamiin hojii dhabu?
Somaaliyaan ONLF'n tarree shorokeessitootaa keessaa baaste
24 Amajjii 2022
Jeneraalli waraanaa Sudaan Hamdaan Dagaaloo Itoophiyaa daawwachuun maal akeeka?
Kabaja Ayyaana Cuphaarratti walitti bu’iinsa qarqara Finfinneetti uumameen lubbuun darbe
Lammiilee manneen hidhaa Sa'udii jiraniifi sosochii 'Festaala Gurraachaa'
23 Amajjii 2022
Rookeettiin bara 2015 hawaatti ergamte addeessaan walitti bu'uuf
Jan. Baacaa Dabaleefi Dr. Silashii Baqqalaa dabalatee ambaasaaddaroonni 27 muudaman
Firaans jaalattoota saala walfakkaataaf 'wal'aansa jijjiiruu' seeraan dhorkite
NATO'n maali, Raashiyaan hoo maaliif hin amantu?
Saayintistoonni Milkii Weey keessatti wanta ‘sodaachisaa’ hin beekamne argatan
Waa’ee saal-quunnamtii iftoominaan haasa’uun hagam barbaachisaadha?
KMNI namoonni labsii muddamaan walqabate hidhaman akka gadhiifaman gaafate